बधाई ! ब्रिटिश आर्ट पुरस्कार’ को मनोनयनमा परिन् नेपाली चित्रकार । – Yuwa Aawaj
बधाई ! ब्रिटिश आर्ट पुरस्कार’ को मनोनयनमा परिन् नेपाली चित्रकार ।
बैसाख १०, २०७८ शुक्रबार 297
लन्डन : बेलायतस्थित एक नेपाली चित्रकार यहाँको चित्रकलासम्बन्धि एक राष्ट्रिय पुरस्कारको लागि मनोनयनमा परेकी छन् ।
बेलायतको वे’ष्ट मिडल्याण्डमा बस्दै आएकी ‘पोर्ट्रेट आ’र्टिस्ट’ सरिता महर्जन ‘द भाइकिङ क्रु’जेज् ब्रि’टिश आर्ट प्राइज २०२१’ का लागि मनोनयनमा परेकी हुन् ।
‘आ’र्टिस्ट्स एण्ड इलु’स्ट्रेटर्स’ नामक चित्रकलासम्बन्धि लोकप्रिय बेलायती म्यागेजिनले यो पुरस्कार दिन लागेको हो । पुरस्कारका लागि बेलायतभरबाट अनलाइनमार्फत आवेदन गर्ने सयौं चित्रकारहरुबाट छनौट भएका ५० जनामा सरिता परेकी हुन् ।
महामा’रीका कारण सिर्जित अनि’श्चितता र निराशा झल्काउने सरिताको चित्रमार्फत् उनी यो पुरस्कारको लागि मनोनित भएकी हुन् ।
उनीसंगै मनोनित सबै ५० चित्रकारले तयार पारेका चित्रकलाको मुल्यांकनपछि निर्णायकहरुले पहिलो, दो’स्रो र ते’स्रो स्थानका विजेता घोष’णा गर्नेछन् । त्यस्तै, अनलाइन भोटि’ङमार्फत् सबैभन्दा बढी मत पाउनेले ‘पिप’ल्स् च्वाइस् अवार्ड’ हात पार्नेछन् ।
विजेताले नगद २ हजार पाउण्डसहित कुल १० हजार पाउण्ड बराबरका विभिन्न पुरस्का’र पाउनेछन् । जसमा ७ हजार पाउण्डको रिभर क्रुज र आर्टिस्ट्स एण्ड इलुस्ट्रे’टर्स म्यागेजिनमा
फिचरदेखि बेलायतका राष्ट्रिय स्तरका प्रद’र्शनीहरुमा चित्रकला प्रदर्शन गर्ने अवसरसम्म समावेश छन् । पुरस्कारका लागि मनोनित हुने सबै कलाकारका चित्र यही वर्ष आयोजना हुने लन्डन ग्यालरीमा पनि राखिनेछन् ।
पुरस्कारका लागि मनोनित सरिताको चित्र
ललितपुर ग्वार्को घर भएकी सरिता पछिल्लो डेढ दशकदेखि ‘पोर्ट्रेट आ’र्टिस्ट’ का रुपमा सक्रिय छन् । बेलायतको युनिभ’र्सिटी अफ वुल्भरह्याम्पटनबाट फाइन आर्टमा मा’स्टर्स गरेकी उनले १० वर्षअघि बेलायत आउनुअघि काठमाडौं युनिभर्सि’टीबाट फाइन आर्टमै ब्याचे’लर डि’ग्री हासिल गरेकी थिइन् ।
सरिता अहिले फुलटाइम रुपमा चित्रकलामा सक्रिय छन् । उनी बेलायतसहित अमेरिका, अष्ट्रेलिया र नेपालसम्म पनि आफ्ना ग्राहकहरु कमाउन सफल छन् । बेलायतमा अहिलेसम्म दर्जनौं संख्याका क्षेत्रीय तथा रा’ष्ट्रिय स्तरका चित्रकला प्रद’र्शनीमा पनि उनले आफ्ना चित्रहरु प्रदर्शन गरिसकेकी छन् ।
उनले बेलायतमै यसअघि पनि चित्रकलाकै माध्यमबाट कयौं सम्मान र पुरस्का’र जितिसकेकी छन् । बेलायतको राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कारका लागि मनोनयनमा परेपछि यसले आफ्नो करियरमा थप एक्सपोजर मिल्ने अपेक्षा सरिताको छ । ‘यो पुरस्कार जित्न सके यसले मलाई यहाँको नेश्नल लेभलकै एक्स’पोजर दिलाउनेछ भन्ने लागेको छ’, उनले नेपाली लिं’कसँग भनिन् ।
भोटको लागि अपिल
‘ब्रि’टिश आर्ट प्राइज २०२१’ का लागि मनोनित हुँदा उत्साहित छन् सरिता । बेलायतको राष्ट्रिय स्तरकै पुरस्कारमा भएको मनोनयनलाई उनले आफ्नो कामबाट नेपाललाई चिनाउने अवसरका रुपमा लिएकी छन् । म मेरो काममार्फत् मेरो देश नेपाललाई चिनाउन अझै बढि समर्पित भएर लागेकी छु ।
तपाईंहरुको माया र साथको आशा गरिरहेकी छु’ , पिपल्स् च्वाइस् अवार्डका लागि सम्पूर्ण नेपालीमाझ भोटिङको अपिल गर्दै सरिताले भनेकी छन्, ‘एक नेपाली कलाकारलाई उसको सपना हासिल गर्नमा सघाउन एक मिनेट समय दिएर भोट गरिदिनुहुन म आ’ग्रह गर्दछु ।’ भोटिङका लागि मे महिनाको २७ तारिखसम्मको समय रहेको उनले जानकारी दिइन् । -नेपाली लिन्क बाट
Prevतुरुन्तै लकडाउन गर्न चिकित्सकको सुझाव !
Nextकटहर खानुको ९ फाइदाहरु हेर्नुहोस् ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली पुनः नियुक्त, सपथ भोलि ।